श्रीमानले अलपत्रै पारेर बेपत्ता भईदिएपछि संगीताक‍ो यस्तो बेहाल! भन्छिन्: ‘उहाँ फर्किए म सात जुनी कुर्न तयार छु ।’ (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमानले अलपत्रै पारेर बेपत्ता भईदिएपछि संगीताक‍ो यस्तो बेहाल! भन्छिन्: ‘उहाँ फर्किए म सात जुनी कुर्न तयार छु ।’ (भिडियो सहित)
admin December 23, 2020 December 23, 2020 भिडियो, समाचार	0
फेसबुकबाट शुरु भएको चिनाजान र त्यसपछि निरन्तरको बोलीचालीले गर्दा बसेको माया प्रेमको शुरुवात नहुँदै अन्त्य भएको छ । सुन्दर र संगीताको सम्बन्धलाई परिवारले नस्वीकार्दा पनि यी दुवैले एकअर्काको साथ दिई नै रहे । त्यसैको नतिजा हो यीनीहरुले भागी विबाह पनि गरे । तर अचानक के भई दियो सबै कुरा सक्किएको बताउँछिन् संगीता ।
११ बर्षमै आमा बनेकी भावनाको परिवारको जिम्मा लिएकी सुस्मिताको कहालीलाग्दो कहानी,रुदै सबै खोलिन मिडियामा